Dyagilevo uju izinyosi ukukhiqiza kusukela umpe izidakamizwa Angelica, okuyinto advantageously likhula ezintabeni Altai. Lo mkhiqizo iyi-elite futhi ezingavamile. It libhekene konsundu, ngezinye izikhathi nge amber, ngokubomvu noma tinge ogqamile. Uju Angelica kuyinto viscous kakhulu, kodwa crystallization yayo kwenzeka kancane ngokwanele, eyenza umkhiqizo aqhubeke ewuketshezi isikhathi eside.
Kuzuzisa Diaghilev uju
Imithi Sekuyisikhathi eside esetshenziswa Diaghilev uju, ayelapha ezivuma kungenzeka ukwelapha izifo eziningi. Lokhu kunomthelela aphathe hemoglobin yemvelo kanye nokuqinisa amasosha omzimba, isetshenziswa nge uvalo, ukukhathala, ukuqaqamba kwamalunga omzimba, kanye ukwelapha izifo isibindi, izinso kanye wesinye. Ngaphezu kwalokho, izinzuzo enkulu Diaghilev yezokwelapha kuletha kubantu abaphethwe isifo senhliziyo ezifana isifo sokuqina kwemithambo yegazi, esivimba amanzi sokuwohloka, isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, hypotension nezinye izifo zenhliziyo nemithambo yegazi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le uju Angelica kunomphumela omuhle microflora emathunjini, normalizes motility yayo, kuvusa inqubo ukugaya, aqede izinhlungu zibe. Ngokuvamile umkhiqizo ukufuywa kuyabekwa ekwelapheni enteritis, nesifo, kolwelwesi, ukuntula enzymatic kanye ukuqunjelwa.
Ukusetshenziswa uju imithi Angelica
Ukulandelela izakhi kanye amavithamini, okuyiwona ayingxenye ebaluleke kakhulu lo mkhiqizo, ulinganisela ngokuphelele, okwenza kube nokwenzeka ukuyisebenzisa ukulungiswa sebuningini zokupheka athandwayo. It is wafakazela ukuthi Dyagilevo uju okukhipha emisebeni nomzimba womuntu, futhi abhubhise amagciwane ahlukahlukene nama-virus. Lapho isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko umkhiqizo asebenzayo ikhuthaza ukuphulukiswa okusheshayo ukusikeka okuncane nokwelapha amanxeba amancane amanxeba purulent.
Lapho i-Alzheimer Kunconywa kaningi yidla uju Diaghilev, property enenzuzo ukuze umsebenzi ubuchopho abadala kanye usiza ukuqinisa imemori izingane. Lapho imithi ukukhula iziyaluyalu iqondiswa njengoba stimulator, inqubo normalizing.
Abantu abaphethwe nokwehluleka ukusebenza kwezinso, njengoju lwezinyosi ebekiwe Diaghilev. izithako zako asebenzayo neqhaza wukwehlukana amatshe nokusiza ukuletha kubo ngokuphepha izinsalela kusuka emzimbeni. Okungalapheki gallbladder izifo eziningi kusheshe amenable yokwelapha izidakamizwa, uma ngesikhathi esifanayo ne izidakamizwa zisebenzisa Diaghilev uju. Lo mkhiqizo iyona engcono ithuluzi esisemqoka ekwelapheni imikhuhlane, ukucinana kwemithambo yomoya emaphashini kanye somoya ukukhanya degree. Kuyinto efiselekayo ukuthi uju Angelica ekhona kwi-desktop yakho, njengoba ukusetshenziswa kwayo njalo uyakwazi ukukusindisa eziningi izifo.
Izimo ukusetshenziswa uju Dyagilevo
Naphezu kwazo zonke lezo izimfanelo ezinhle Diaghilev uju, kufanele kuphawulwe ukuthi lo mkhiqizo awukho panacea for zonke izifo, ngisho has Izimo yayo. imikhiqizo bee kufanele kususwe ngokuphelele kusukela ekudleni ngesikhathi sikashukela uhlobo lokuqala futhi ukusabela kabi komzimba nomzimba. Nciphisa izinga yansuku zonke ukusetshenziswa uju kumele kube in iziyaluyalu kohlelo emathunjini, futhi uma hypersensitive. Asthmatics honey bee angase avuse somoya kuhlasela, okuyinto ngokuvamile ehambisana nobutha ukucobeka jikelele nomkhuhlane. Ngakho-ke, uma okungenani oyedwa zezinkinga zempilo ngenhla, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngaphambi kokuba baqale ukusebenzisa ukwelashwa Diaghilev uju.
Ikhoyili Medical Mishina: ukubuyekezwa kanye incazelo
Umthetho kuphikisa ka kuphikisa: okushiwo umqondo nezibonelo
National Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev (Nau): incazelo, ikhethelo kanye nokubuyekeza
Ukuhumusha kwemibhalo kanye notarized
Umuthi 'Alerzin ": yokusetshenziswa, ukwakheka, incazelo kanye nokubuyekeza
Ukondla amaphuphu ezinsukwini zokuqala zokuphila: amathiphu wabaqalayo
"International" inani lazo. Uyini ukungabhubhiseki zomoya?
Imoto ku-hydrogen. Generator okwesikhathi hydrogen imoto
Umqoqi wamanzi: izinhlobo, ukufakwa